Wararkii ugu dambeeyey dagaalka ciidamada Caare iyo Somaliland
HARGEYSA - Waxaa dagaalo maanta 28/07/2019 dhexmarey ciidamo uu wato Korneyl Caare iyo kuwa Somaliland degaano galbeedka ka xiga degmada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag kuwaas oo wararku xusayaan iney weli xiisadu taagan tahay.
Caare oo laga wareystey Idaacada BBC laanteeda Af-Soomaaliga ayaa sheegey in maleeshiyaadkiisu ku sugan yihiin degaanka Tabco isagoo xusey inuu dagaalka uu la galay ciidamada Somaliland sii wadi doona inta laga helayo cadaalad lagu dhaqo dadkiisa kuwasoo sheegey ineysan waxba ku haysan maamulka Muuse Biixi.
Sida warsidaha Garowe Online horey u shaaciyey dagaalkaan ayaa dhacey iyadoo lagu gudda jiro waan-waan u dhexeysa Korneyl Caare iyo maamulka Somaliland. Halkaan ka akhriso
Warar laga heleyo saraakiil ka tirsan Somaliland ayaa sheegaya in Korneylka dagaalkii maanta dhacey lagaga furtey gawaari dibna looga riixey degaankii uu qabsadey.
" Caare waxaa uu ka faa'ideystey waan waantii socotey taasoo sababtey in ciidamdiisa gaaraan degamadaann dagaalku ka dhacey." sidaas waxaa Garowe Online u sheegey sarkaal ka tirsan ciidamada Somaliland oo diidey in magaciisa la xuso.
Caare ayaa ciidamada Somaliland ka goostay markii uu qayb ka noqdey colaado Sanaag ku dhexmaraya beelo wax dagan gobolkaasi oo bilihii lasoo dhaafayey dagaalamayey.
Dhinaca kale, Caare iyo ciidamada uu wato ayaa maamulkii Madaxweyne Gaas fariisimo ka siiyey degaano ku dhow Sanaag taas sida muuqata maamulka cusub ee Puntland go'aankaas wax ka badaley.
Biixi oo wadahadal kula jira sarkaal horey uga baxsadey maamulkiisa
Somaliland 28.07.2019. 12:32
Generalkaan ayaa ciidamo uu wato waxay degaano maamulkaan ka arimiyo isku horfadhiyaan xoogag horey uga goostay.
Puntland 24.11.2018. 14:38
Somaliland oo lagu eedeeyay inay ku guuldareysatay xalinta colaada Dhumay
Somaliland 18.11.2018. 11:52
Ergo nabadeed oo ku baxday Dagaalka Konfurta Sool [Dhageyso]
Puntland 28.10.2018. 18:44
Aqalka Sare oo codkiisa ku biiriyay baaqa nabadeed ee dagaalka Sool
Soomaliya 24.10.2018. 16:02
DF oo Baaq Nabadeed kasoo sartey colaadda gobolka Sool
War Saxaafaded 23.10.2018. 12:48